ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သော “ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များမှ ဆွေးနွေးခြင်း – Yangon Hluttaw
Home / အဆိုများ / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သော “ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များမှ ဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သော “ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များမှ ဆွေးနွေးခြင်း
Ygn Editor July 9, 2019	အဆိုများ 177 Comments 1,114 Views
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၉
ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန႕ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ေပးပို႕ေသာ “ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း” နွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၊ လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ရွင္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးလြင္၊ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇင္မင္းေထြး၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ဝင္း၊ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထူး၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျမလွစံတို႕မွ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၉
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၂)ရက်မြောက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ပေးပို့သော “ထန်းတပင်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်မည့် စက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်း” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မိုးလွင်၊ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇင်မင်းထွေး၊ အလုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဝင်း၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထူး၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မြလှစံတို့မှ အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Previous တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၁၀)ရပ်ကွက် သံသုမာလမ်းမပေါ်ရှိအခြေခံပညာဦးစီးဌာနအား တရုတ်ဘုံကျောင်းမှ မြေနေရာလှူဒါန်းထားသော အ.မ.က(၁၉) (ယခုတွင် ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသည့်) ကျောင်းကို ပြန်လည်ပြီး ကျောင်းအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမေးမြန်း
Next သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ညိႇႏွိဳင္းအစည္းအေဝးကို လူမႈေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
Lvb5tc That isagreat tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info Thank you for sharing this one. A must read post!
yin6vN http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
UBmwel https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
cUhJM1 http://xnxx.in.net/ xnxx videos
xvsoeN http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll
Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply could not come across. Whatagreat website.
can i order generic tizanidine in US
The InnoGames development team is dedicated to giving players the best possible gaming experience. Long-term gaming enjoyment, technical advances, and high-end graphics are the priority at InnoGames. The opinions of the players of our online games are incredibly important to us and the InnoGames team is always happy to get feedback. The good news is, you can play similar FPS games in your web browser. Bullet Force and Krunker are two shooting games you can play on the web, and they have active communities, so youвЂ™ll always be able to findamatch! Cards Against Humanity,acard game where you need to finishasentence or answeraquestion using existing cards. The funniest answer wins. Simple!There are loads of other platforms where you can play the game, like Wordner and Pretend YouвЂ™re Xyzzy, but we’reafan of the airconsole version, in which you can use your smartphones as controllers.Also: Azala.info hasapretty solid version! It takes an incredible amount of skill to be the best at these ten online multiplayer games because they are some of the hardest titles out there. http://www.haxorware.com/forums/member.php?action=profile&uid=58352 Lots of annoying pop-up messages when navigating the menu when offline. For the public, Trucks are hard to park, but who would be scared by parking them inagame? The gameplay is dynamic, and the controls you use to move the truck are very much realistic. It offers you many choices of big trucks: Vigo Truck, Cargo Truck, Oil Cargo Truck and Trailer Truck with various performances so you will never be bored of this game. Also, it has great graphics and real 3D physics. On the screen, you will see the steering wheel, accelerator and brakes. This car game isafun 3D offroad racing game in which monster trucks, rally cars, and pickups, compete with each other. This video game will have you use your driving skills to win in three different racing modes. CSR Racing2is one of the best online racing games that are currently available in the market for Android users. They can easily play this game online. There isacampaign mode for it where you can simply buy and customize your cars, add upgrades and also race. CSR Racing2setsahigh standard and brings the hyper-real drag racing into account. Also, this game is completely equipped with 3D graphics and isafreemium game which you can access anytime.